UmthengisiSmile: Kutheni kufuneka Ukhuphe Iqela lakho leNkxaso ye-Ecommerce | Martech Zone
Xa ubhubhane wabetha kwaye abathengisi bavalwa, ayizange ichaphazele nje iindawo zokuthengisa. Ibe nefuthe kulo lonke ikhonkco lobonelelo elondla abo bathengisi nabo. Eyam ifemu yokubonisana ngenguqu yedijithali isebenza nomvelisi ngoku ukubanceda ekwakheni i-Ecommerce yabo kunye ne-Martech stack ukuxhasa a ngqo-kubathengi abalahla ishishini. Yiprojekthi ecela umngeni njengoko sikwazile ukusebenza yonke indlela ukusuka kuphando lwebrendi kunye nokudala, ukuya kuthi ga kwintlanganisela yolungiselelo.
Ukuba igama elitsha lingene kolu shishino akukho lula. Siye sabacebisa ukuba kufuneka babe nezicwangciso ezimbalwa ezikumgangatho ophezulu endaweni:
iimveliso – lo ngumahluli wabo kuba kudala beyila kwaye besenza ifashoni amashumi eminyaka. Sele beyazi into ethengisayo kunye nemigca yemveliso elandelayo ekufuneka ikhululwe.
Amava omsebenzisi Siyazi ukuba ukuphunyezwa kwabo kwe-ecommerce kufanele kube yeyona nto ilungileyo, ke sibeke indawo kuyo Ivenkile yokuThengisa kwaye isetyenziswe exhaswa kakuhle kwaye umxholo we-Shopify olungiselelwe ukusebenza ukusuka.
Ukuthunyelwa kunye nokuBuyisa -Ukuthunyelwa kwasimahla kulungile, kodwa ukuba nengxowa esele ilungile yokubuya yento ekufuneka ibuyiswe ibalulekile.
Inkonzo eyenzelwe - okokugqibela, kodwa ubuncinci, ukuba neqela lenkxaso lokubeka iliso kwi-imeyile, ifowuni, kunye nemidiya yoluntu ukwenza izinto zilungele umthengi kuya kubaluleka.
Lo mxhasi akanalo uphawu olusekiweyo, ngoko ke zonke ezi zicwangciso kufuneka ziqaliswe ngaxeshanye. Ilula kakhulu loo nto kwiimveliso, amava, kunye nokuthumela ngenqanawa… kodwa ulisungula njani iqela lenkonzo yabathengi? Ewe, kuya kufuneka uyikhuphe ngokunyanisekileyo.
Kutheni le nto inkxaso evela ngaphandle?
Amaqela enkxaso aphuma ngaphandle anesixa esimangalisayo samava esiya kongeza ixabiso kwi-brand yakho. Iinzuzo zokukhupha iqela lakho zibandakanya:
Ukunciphisa iindleko zokuqesha abasebenzi okanye iqela le-VAs. Amaxabiso aguquguqukayo kunye nesiko. Akukho mfanelo, akukho ntlawulo efihliweyo.
Ukhuseleko olungenazinkathazo iintsuku ezisixhenxe ngeveki. Ukufikelela kwiqela leengcali zenkonzo yabathengi ngaphandle kokuqesha, ukuqeqesha kunye nokulawula.
Khulisa ukuthengisa kwakho ngesicwangciso esibanzi samava omthengi aziswa yidatha evela kwingxelo yabathengi.
Abathengi bakho baya kufumana awona mava alungileyo okuthenga kwi-intanethi kwiqela elithetha iilwimi ezininzi elinegrama ekhethekileyo kunye namaxesha okuphendula ngokukhawuleza.
UmthengisiSmile yinkokeli kwishishini lenkxaso ye-ecommerce yangaphandle. Baxhasa abakwaShopify Partner kwaye baxhasa iimarike ezibandakanya iAmazon, iOverstock, iEtsy, iEbay, iSears, iWalmart, kunye neNewegg. Inkxaso ephambili ibandakanya:
Inkxaso email Nokuba iimfuno zakho zokhuselo ziintsuku ezisi-7 ngeveki, ngeempelaveki okanye ngeeholide, uSellerSmile ubonelela abathengi bakho ngenkxaso kuzo zonke iimarike ze-e-commerce kunye neevenkile zewebhu.
Ulawulo lweSifa -Uphononongo olubi loluntu kunye nezimvo yinxalenye eqhelekileyo yokwenza ishishini kwi-Intanethi kodwa izimvo ezibalulekileyo ezingajongwanga zinokusasazeka ngokukhawuleza. Iinkonzo zabo zolawulo lwesidima ziqinisekisa ukuba ingxelo yakho yebhrendi ilawulwa.
Inkxaso Yengxoxo Ephilayo -Ukubonelela ngenkxaso yengxoxo ephilayo kubakhenkethi bakho bewebhusayithi yeyona nzuzo iphambili yokhuphiswano evala umsantsa kwaye yakha ukuthembana phakathi kwakho nabaphulaphuli bakho ngoncedo olukhawulezayo, olusebenzayo oluvela kwiingcali zenkonzo.
Ukongezelela, I-SmellerSmile ingabonelela:
Ukunika ingxelo kunye noNxibelelwano -Ingxelo yenyanga eyenzelwe wena kunye nesicwangciso sokufowuna ngamaxesha athile kunye nomphathi weakhawunti yakho ukuphonononga amanqaku aphezulu, ukuthatha, kunye nokuqonda okunokwenzeka.
Ukubonisana ngeNkonzo yabaThengi -Ujonge ukuphucula iqela lakho lenkxaso? U-SellerSmile usebenzisana nokuhlaziya ukuseta kwakho okukhoyo, amaxwebhu kunye nemigaqo-nkqubo kunye noyilo lwesicwangciso sempumelelo.
Inkxaso yeNdaba zoLuntu -Ulawulo loluntu ukunika abathengi amava angenamthungo kuFacebook, Twitter, Instagram, LinkedIn kunye nokunye.
Ulawulo lwe-FAQ -Yenza kube lula ukufumana iimpendulo ezichanekileyo kwiMibuzo eQhutywayo ebuzwa ngokukhawuleza. Iziseko zakho zolwazi lukawonke-wonke ozisebenzelayo kulapho abathengi baya kuqala khona ukuze bafumane uncedo abaludingayo.
Uphononongo lweNgxelo -I-SellerSmile inokuhlela ngesandla uphononongo lwemveliso yakho yonke imihla ukuveza amathuba aphambili okuphindaphindwa kwemveliso kunye okubelelwe elwazini izongezo.
Ukuba ungathanda ukuqalisa inkxaso yabathengi ukuqhuba amava angcono kubathengi kunye neentengiso ezininzi:
Zama uSellerSmile Mahala kangangeentsuku ezisi-7
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa ikhonkco lethu lokudibana UmthengisiSmile kweli nqaku.
tags: inkxaso yeAmazonamava kumakhasimendeuxhaso lwabathengiInkxaso ye-imeyile ye-ecommerceinkxaso ye-ecommerceInkxaso ye-imeyileEtsy inkxasoInkxaso ye-Newegginkxaso ye-ecommerce yangaphandleinkxaso yangaphandleulawulo lwegamaumthengisithengaShopify kunye nenkxasoShopify inkxasoIvenkile yomxholoezentengisoinkonzo yabathengi kwimidiya yoluntuezentengiso kwi-intanethiulawulo lweendaba ezentlaloulawulo lweendaba ezentlalosihlokoInkxaso yeWalmartwokie